Halyeygii Paris ku badbaadiyay cunuga dabaqa ka laadlaaday, xaguu ku dambeeyay? | Baahin Media
Halyeygii Paris ku badbaadiyay cunuga dabaqa ka laadlaaday, xaguu ku dambeeyay?
Dec 24, 2018 - jawaab
Mamadou Gassama oo ah soo galooti ka soo jeeda Mali, oo qaxootinimo ku galay Faransiiska, waxaa lagu xasuustaa inuu si la yaab leh u badbaadiyay cunug yar oo kasoo laadlaaday guri dabaq ah, tallaabada uu qaadayna waxay soo jiidatay indhaha caalamka.
Ficilkan wanaagsan oo uu sameeyay galabnimo Sabti ah, taariikhdu markii ay ahayd 26-kii bishii Meey ee sannadkan, ayuu ku noqday halyeey loo wada riyaaqay.
Wuxuu howlgalka badbaadinta ah u sameeyay sida caaracaarada, isagoo jaranjaro la’aan kor u fantay dabaqa afaraad ee uu cunuga yar ka soo dhici rabay.N
Sheekadiisa ayaa aad u caan baxday waxaana lagu tilmaamay inuu si dhab ah u sameeyay ficilka uu jilaaga lagu magacaabo Tom Holland ku sameeyo filinka shactirada ah ee Spiderman, kaasoo filimka dhexdiisa wax ku badbaadiya isagoo leh awoodda caarcaarada.
Haddaba markii uu warkaas shaac baxay ka dib, xagey ku dambeysay xaaladda Mamadou Gassama, oo isla markaasba ay u fududaatay helitaanka dhalashada Faransiiska.
Image captionNinkan tallaabada geesinimada leh qaaday waxaa la kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
Labo isbuuc ka dib markii uu wiilka yar badbaadiyay, Gassama wuxuu dib ugu laabtay waddankiisa hooyo ee Mali, ka dib markii uu casuumaad ka helay madaxweynaha dalkaas.
Markii uu tagay magaalo madaxda Bamako, wuxuu la kulmay aabihiis oo uusan arkin tan iyo sannadkii 2011-kii, xilligaasoo uu Yurub u hayaamay isagoo 15 sano jir ah.
Wuxuu sii maray waqooyiga Afrika, isagoo kasii gudbay badda Mediterranean-ka, sii uu fursado uga raadsado qaaradda Yurub.
Gassama aabihiis xitaa wuxuu markii ugu horreysay ka tagay xaafaddii uu ka soo jeeday, wuxuuna safarkiisii ugu horreeyay ku tagay caasimadda Bamako, si uu wiilkiisa ula kulmo.
Bishii Siteembar, waxay maxkamad xukun ku riday aabaha dhalay wiilka yar ee kasoo laadlaaday dabaqa, ka dib markii lagu helay dambi ah inuu cunugiisa dayacay.
Ninkaas iyo cunuga yar ee uu dhalayba wali magacyadooda lama shaacinin.
Balse ninka dhallinyarada ah ee badbaadiyay cunuga ayaa durba helay dhammaan warqadaha sharciga ah ee u horseedaya inuu gacanta ku dhigo dhalashada Faransiiska, wuxuuna ka guuray meeshii uu horay u daganaa, maadaama uu awood u yeeshay inuu guri kireysto.
Image captionWuxuu horumar ka sameeyay shaqadiisa cusub
Waxaa lagu soo warramay in Gassama uu horumar weyn ka sameeyay shaqadii cusbeyd ee uu ka helay magaalada Paris, balse ma cadda waxa dhici doona marka uu dhammaado qandaraaska uu shaqadaas u saxiixay oo ku wakhtiyeysan muddo 10 bilood ah.
Booska uu shaqada ku leeyahay waa mid aan toos ahayn oo tababar ah, wuxuuna bil walba helaa lacag dhan 534 doolar oo kaliya, isagoo shaqeeya 96 saacadood oo ka mid ah guud ahaan bisha.